Heshiiskii Naato iyo Sweden oo la fileyo inuu baarlamanku ansixiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heshiiskii Naato iyo Sweden oo la fileyo inuu baarlamanku ansixiyo
La daabacay onsdag 25 maj 2016 kl 10.39
Heshiiskii wada-shaqeeynta Naato iyo Sweden oo loo codeeyn doono
Hoggaamiyaha xisbiga Väsnter Partiet Jonas Sjöstedt. Sawirle:Pavel Koubek/TT sawir: Pavel Koubek/TT
Maanta oo arbaca ah ayaa la filayaa in si aqlabiyad ah ay xil-dhibaannada baarlamka Sweden ugu codeeyaan heshiiskii wada shaqeeynta ee Naato.
Middaa ayaa ka dambeeysay kolkii uu xisbiga Sverigedemokraterna go’aansaday in aanu shuruudeeyn dib u dhigista xeerka muddo sannad ah oo uu horay xisbigu u sheegay inuu si wada jir ah ugu codeeyn doono xisbiga Vänster Partiet (V).
Hoggaamiyaha xisbiga Vänster Partiet Jonas Sjöstedt ayaa sheegay in aanu la fajac-sanayn tallaabada xisbiga SD. Halka uu hoggaamiyaha xisbiga SD uu dhankiisa sheegay in fikir ahaan uu xisbigiisu ka soo hor-jeedo wada-shaqeeynta Sweden iyo ururka gaashaan-buurta naato.
– Waxaannu uga soo hor-jeed-san doonnaa heshiiskan in aannu ka gaabsanno iyo mooshinka uu xisbigu soo ban-dhigay, hase yeeshee marnaba taageeri mayno dib u dhigis heshiiska loogu codeeyo sida uu xisbiga Bidixdu soo jeediyay, sidaa waxaa sheegay Åkesson, hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna.
Ma laga yaabaa in baarlamanku meel-mariyo heshiiska?
– Baarlamanka ayay ka jirtaa aqlabiyad taabac-san heshiiska. Inta aan ka war-qabo waa xisbigayga iyo xisbiga Vänster Partiet cidda ka soo hor-jeedda heshiiska. Qiyaasstii waxey labadayada xisbi ku leeyihiin baarlamanka xubno gaarsii-san 20%, mana ahan tiro ku filan sidii loo hor-istaagi lahaa heshiiska.
Heshiiska ayaa qoraya inuu ururka gaashaan-buurta Naato uu Sweden ku meeleeyn karo cutubyo ciidammadiisa, waa haddii uu dalkani ka codsado.
Xisbiga Vänsterpartiet wuxuu taabac-san yahay inuu heshiiska ka hor-yimaado si dib u dhac sannad ah uu ugu dhaco.
Halka uu af-hayeenka xisbiga Sverigedemokraterna ee arrimmaha difaaca, Mikael Jansson, horay u sheegay inuu xisbigiisu qaatay fikir la mid ah midka xisbiga vänster Partiet. Hase yeeshee uu iminka xisbiga SD go’aansaday in aan loo codeeyn dib-u dhigista heshiiska, maadaama ay u muuqatay xisbiga in tallaabo noocaasi ahi ay hor-seedayso oo keliya inay heshiiska hir-gelintiisa ku timaaddo dib u dhac dhowr toddobaad ah oo keliya.
– In fikir un la iska qaato, maahan wax macne ku fadhiya, balse waxaannu nahay xisbi doonaya inuu masuuliyaddiisa ka soo baxa. Sidaa daraadeed waa in aannu aqbalno in eynaan ku guuleey-san doonin codeeyntan codeeynta baarlamanka, sida uu sheegay Jimmie Åkesson isaga oo hadalkiisii sii wata.
Hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt, ayaa isagu sheegay in aanay ka fajacin tallaabada xisbiga SD ku tallaabsaday.
– Waxaan oran lahaa inay tallaabadani tahay mid la filayay. Xisbiga SD ayay siyaasaddiisa ku wajahan dhexdehexaad-nimada iyo gaashaanbuurta Naato in muddo ahba ahayd mid aan qeexnayn.
Xisbigaagu ma wuxuu ugu codeeyn doonaa baarlamanka in heshiisdib loo dhigo heshiiska?
– Waa mid cad inaan sidaa ugu codeeyn doonno. Waxaannu aamin-sannahey in heshiiskani yahay mid aan wanaag-sanayn. Waa tallaabo loo qaadayo dhabbada ka mid noqoshashada ururka Gaashaan-buurta Naato. Hab aan wanaagsanayn ayaa baaritaan loogu sameeyay, waxayna ahayd in la siiyo wakhti lagaga doodo, sida uu sheegay Jonas Sjöstedt.